Umgwaqo anganikeza eningi imibono emisha, fresh futhi original. Nokho, abaningi ozama beveza siqu isitayela yayo inimitable, ezwakalisa umbono ayo okwenzekayo. Insimbi ekhululekile kakhulu kulokhu "fashion emgwaqweni." Lesi sitayela unethemba nge touch of a ngobudedengu ezithile, ngakho nobuntu intsha, uthi yini ukhululekile futhi umxhwele ngesikhathi esifanayo, kungcono sasivumela nzima ukubona nemithetho yayo kanye imingcele. fashion emgwaqweni, ekubeni ezimele kakhulu imfashini wesimanje, ekuqaleni kubonakala ezingxenyeni ezahlukahlukene.
Shesha abantu agcwele Silhouettes, ukushintsha isikhathi, izibani emizini omkhulu .... idolobha ngalinye, efana wonke umuntu, uhlamvu yaso ehlukile enhle, kubonakala ngokubukeka kwakhe. Kunzima ukuqhathanisa begodu sizisebenzise ngesikhathi esifanayo ithephu omunye. Uma ubheka i-inhloko-dolobha yezwe, ngamunye charm yayo, charm yayo, ubuntu ayo, siqu emgwaqweni imfashini yayo. Paris, eLondon, eMoscow, New York - isiqinisekiso ecacile. Konke lokhu ukwehluka, ungubani, ngokuhlanganiswa izici yokucabanga, iphindwe a wobuphixiphixi ezithile imfashini, sibonakalisa isitayela, okuyinto ngesibindi nangekutetsemba emhlabeni.
Street Fashion - lena "cocktail" bathanda, Amathrendi, imfashini brand usebenzisa "ezenziwe ngesandla". Kulokhu ihlanganisa isitayela, Uma unganakile, zonke incongruous, lowo muntu (esiyingqayizivele kuye) incazelo. Uphefumulela imfashini kanye nomklamo omkhulu ukudala, amaqoqo elikhanyayo fresh. Street Fashion kahle bakwazi ukudlulisela kwemizwelo. Kukhona kungaba izinto eziningi, zonke eqiniso, kuba lula futhi fast. Isitayela kuyinto inkululeko ephelele, kungcono njalo fresh, ngokwemvelo. Kuyinto (ngomuzwa ngesilinganiso) lokusungula.
Fashion emigwaqweni French.
Njengoba wazi, amaFulentshi libukeke futhi njengabesifazane njalo. Isibhakabhaka laseParis ilethe njalo. Kumelwe uthi, akukho okushintshile ngisho ngokuhamba kwesikhathi. Esikhathini imfashini French namuhla (njengoba ngempela futhi njalo) ukwamukela "flying" indwangu ukukhanya futhi zingabonisi ngalé ukwenzela ukungena okuncane kakhulu .... Uma sikhuluma ngezindaba ezithile, kubalulekile ukukhomba zonke izinhlobo izingubo usike kanye nemibala, isiketi ephezulu waisted ibhulukwe esifushane noma eside. Paris entwasahlobo esingokwemvelo iyashintsha iyaphupha ibe shades. Ngokwesibonelo, ulamula, Mint ice blue noma oluhlaza. Esikhathini 'sokuthula' izingubo kufanele babekhona-accessory elikhanyayo. Kungaba isikhwama, umgexo noma isigqoko yasekuqaleni. Popular nekuphikisana ezinombala ofanayo futhi "ezimanakanaka" indwangu zinamabala. imfashini Street Paris kuyinto okwakhe ongapheliyo. Lapha, kuzo zonke intombazane nakanjani unokuthile ukunambitha. Ukuhlala esiyingqayizivele, ungathola njalo isitayela sakho siqu.
imfashini Street eMoscow.
Moscow emgwaqweni isitayela kudala uyikhiphe ephepheni, kuhambisana zonke wochwepheshe ebekiwe, "Law of Attraction". Uma ngaphambili eRussia lezwakala, njengoba bacwiliswa a "ushanela", futhi ukugqoka yini imfashini amadolobha aseYurophu njengoba umthetho, kwakungenakwenzeka, kodwa manje imikhawulo Awekho izingubo cishe. inhlokodolobha Modern isiRashiya ngezindlela eziningi uhlobo isikhungo, ukubonisa nokubukeka hle kakhulu, okuningi kuncike kulokhu phezu izitayela fashion. isikhundla laseMoscow (kuhlanganise ezindawo) kufuna sibheké West bababuke ISIFISO ujabulele East, okuyinto iwumthombo omuhle kakhulu wamazwi ugqozi ukudala siqu, ukubukeka kwakho esiyingqayizivele imfashini. Moscow emgwaqweni imfashini - kungcono style khulula futhi beqiniseka abantu abazimisele uzizamele umqondo inimitable zokunambitha ubuntu.
Ukulandela fashion emgwaqweni, kufanele, kodwa-ke, ungakhohlwa ukuthi izingubo - eyodwa nje ngezindlela eziningi yokuzibeka. isithombe yangaphandle ibonisa okuqukethwe yangaphakathi, esivela, ukuthula ngamunye, ngakho kumele kube ukuphelela ngokuhumusha siqu.
Zabesilisa kanye pointy izicathulo zabesifazane: incazelo, imodeli kanye nezincomo
Izimpawu ezifihlekile tattoo "amaphiko '
Indlela yokufaka phansi phansi endlini yokhuni: amathiphu namasu
Hack ngesihloko esithi "Spring". Spring yezandla ngezandla
Izikhangibavakashi Herceg-Novi, Montenegro: Uhlolojikelele, incazelo, umlando kanye nokubuyekeza
Dream Ukuhunyushwa: yini umshado iphupho?
Vilyam Pohlobkin: Biography, incwadi, okungcono zokupheka
Burning mbuzo: lapho ungakwazi ugeze imoto yakho siqu?